Ungakubhala Kanjani Okuqukethwe Lapho Izivakashi Zinquma Ukubaluleka Kwakho | Martech Zone
Ungakubhala Kanjani Okuqukethwe Lapho Izivakashi Zinquma Ukubaluleka Kwakho
NgeSonto, ngoMashi 3, 2013 NgeSonto, ngoMashi 3, 2013 Douglas Karr
Kungakhathaliseki intengo, inani lihlala linqunywa yikhasimende. Futhi imvamisa, lelo nani lizoya ngokuthi ikhasimende liwusebenzisa kanjani umkhiqizo noma insiza yakho. Abathengisi abaningi be-software noma i-service (SaaS) basebenzisa ukuthengisa okususelwa enanini ukuthola inani labo. Lokho okungukuthi, kunokukhokha intengo ephansi yanyanga zonke noma isilinganiso esisuselwa ekusetshenzisweni, basebenza nekhasimende ukuthola inani elinganikezwa yipulatifomu bese belibuyisela emuva entengo elingana zombili izinhlangothi.
Nasi isibonelo… ukumaketha nge-imeyili. Ngingabhalisela insizakalo eyodwa yokumaketha nge-imeyili ngo- $ 75 ngenyanga noma ngihambisane nensizakalo kaNdunankulu ngama- $ 500 ngenyanga. Uma ngingaqhakambisi i-imeyili futhi yisebenzisele ukukhuphula, ukuthola noma ukugcina amakhasimende, $ 75 ngenyanga ayinani elincane futhi kungenzeka kakhulu imali ongayisebenzisa. Uma ngihamba nensizakalo engu- $ 500 ngenyanga futhi bangisiza ekuthuthukiseni imiyalezo yami, bangisiza ukuthi ngiqalise imikhankaso ye-upsell, ukutholwa nokugcinwa… ngingaphumelela ekusebenziseni i-imeyili ukushayela amakhulu ezinkulungwane zamaRandi. Lokho kuyigugu elikhulu futhi kufanele imali oyikhokhile.
Kunesizathu sokuthi kungani abathengisi sebenzisa amaphesenti ekwethulweni kwabo ukunikeza ubufakazi bokunyuka kwenani lemikhiqizo nezinsizakalo zabo. Uma ngishintshele kumkhiqizo wakho futhi kungangongela u-25% emalini yami yokukhokha, ngokwesibonelo, lokho kusho izinkulungwane zamadola ebhizinisini. Kepha uma ibhizinisi lakho likhokha izigidi zamaRandi zezimali, inani lomkhiqizo likhulu kakhulu, liphakeme kakhulu ebhizinisini lakho kunelami.
Abakhangisi bavame ukwenza iphutha lokuchaza i- value unique proposition lokho kuchaza inani le-subjective ngokuya ngombono wabo. Lokhu kungaholela ekhaleni kokulindelekile phakathi kwalokho ocabanga ukuthi inani lakho liyikho nokuthi ikhasimende likhomba inani lakho okufanele libe yilo. Isibonelo: Sisebenza namakhasimende amaningi ku-Search Engine Optimization yabo. Amakhasimende anezingxenyekazi eziqinile, ukumaketha okudala nezinqubo zentuthuko, futhi ingasebenzisa izinguquko ezibalulekile ukuphendula izidingo zezinjini zokucinga zithola inani elingakholeki kumasevisi ethu. Amaklayenti angalaleli, angawenzi ushintsho, futhi aphonsela inselelo izincomo zethu ngokuvamile ayahlupheka futhi awaboni inani eligcwele ebesingalinikeza.
Njengoba ubhala okuqukethwe kwakho kokukhangisa, kunamasu azosiza:
Sebenzisa amaphesenti ezitatimendeni zakho zenani ukuze izivakashi zenze izibalo futhi zibeke ukonga nokuthuthuka ezitatimendeni zazo zemali kunamakhasimende akho.
Nikezela ngezimo zamacala okusetshenziswa, izifundo zamacala, kanye nemikhuba emihle esiza izivakashi zakho ukuthi zinqume inani lakho enhlanganweni yazo.
Nikeza okuqukethwe okukhuluma ngqo ezimbonini ezithile, izinhlobo zezinkampani, nezethameli ukuze izivakashi zakho zithole ukufana phakathi kokuqukethwe kwakho nebhizinisi labo.
Nikeza ubufakazi obuvela kumakhasimende amaningi, izihloko nezikhundla enkampanini, ukuze abenza izinqumo abahambisana nalezo zihloko nezikhundla bakwazi ukuziqonda nabo.
Abanye abantu bakholelwa ukuthi ukumaketha nokuthengisa okususelwa enanini kuyakhohlisa ngandlela thile. Bakholelwa ukuthi wonke umuntu kufanele akhokhe inani elifanayo. Ngingaphikisana nalokho okuphambene nalokho. Izinkampani ezinamanani entengo ayikhathaleli ikhasimende nokuthi zingayisebenzisa kanjani imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Okubi kakhulu - ukumaketha okuqinisekisa ukuvakashelwa, izinga, imali engenayo, njll. Kuyizibopho ezithwele ngaphambili, imali ebekelwe phansi ukuze usebenzise imali yakho uhambe lapho ungatholi imiphumela abakuthembisile. Kungcono ngisebenze nomthengisi ongilalelayo, oqonda izinsiza zami, abone izidingo zami, futhi asebenze ukuhlinzeka ngentengo ehlangabezana nesabelomali sami futhi inikeze inani ebengilidinga.
Tags: Inanivalue valueukuthengisa inaniukuthengisa okususelwa enanini
Umbiko Wokulandela Idatha ka-2012
Ukuvala Igebe Phakathi Kokuthengisa Nokumaketha